Kooxaha Horseed iyo Dekedda oo galabta isku garab dhacay kulan ka tirsan Somali Premier League – Gool FM
(Muqdisho) 20 Juunyo 2019. Kulan xiiso badan ayaa galabta ka dhacay garoonka Banadir Stadium ciyaar qeyb ka ahayd horyaalka Somali Premier League, taa oo dhaxmartay kooxaha Horseed iyo Dekedda FC.
Ciyaartan waxaa u soo daawasho tagay taageerayaal faro badan oo u kala sacabo tumayey labada kooxood, inkasto taageerayasha ay u badnaayen dhanka Horseed FC.
Jawiga garoonka waxa uu ahaa mid qurux badan qeybtii koowad ayaa lagu kala maray barbaro 1-1 waxaana goolka la hormaray wiilasha Horseed, iyadoo uu u saxiixay Ibraahim Budka, haseyeeshee daqiiqado yar kaddib kooxda Dekedda ayaa la timid goolkii barbaraha waxaana u dhaliyay Kabtan Cabaas Aamiin sidaas ayaa lagu kala nastay ciyaarta.
Markii dib la isku soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta labada kooxood fursado badan oo goolal loo filan karay ayey sameeyeen balse ma aysan dhicin inay labada kooxood shabaqada gaaran, kulanka ayaana ku soo dhammaaday gar isku mid 1-1.
Ciyaartan waxaa u soo daawasho tagay marka laga soo tago taageerayasha masuuliyiin kala duwan, waxaana ka mid ah Taliyaha Ciidanka xoogga Dalka Mudane Indho Qarsho iyo masuuliyiin kale.